सहृदयी सर्जन – Tesro Ankha
1697 पटक पढिएको
२२ वर्षअघिसम्म विदेशी डाक्टर नेपाल झिकाएर प्लास्टिक सर्जरी गरिन्थ्यो । हिजोआज टिचिङ, वीर, बी एन्ड बी, सुष्मा मेमोरियललगायत कीर्तिपुर अस्पतालमा प्लास्टिक सर्जरी विभाग खुलेका छन् । त्यतिमात्रै होइन, कीर्तिपुर अस्पतालले नेपालमै प्लास्टिक सर्जन उत्पादन गर्न तालिम दिँदै आएको छ । यस काममा प्लास्टिक सर्जन डा. शंकरमान राईको योगदान महत्वपूर्ण छ ।
अमेरिकाबाट प्लास्टिक सर्जन भएर टिचिङ अस्पताल फर्केका राईले त्यतिबेला सातामा एक दिनमात्रै सर्जरी गर्न पाउँथे । सातामा एक दिनको सर्जरीले चित्त बुझाउन सकेनन् । धेरैभन्दा धेरैको प्लास्टिक सर्जरी गरेर नयाँ जीवन दिन लोभिएका राई गाउँघर पस्थे । बिदा लिएर गाउँ पसेकै वर्ष उनले खुँडे र आगोले पोलेका १५ सय बिरामीको प्लास्टिक सर्जरी गरेपछि बिरामी र आफन्तको आशिर्वचन पाए ।
उनले त्यति सिकाइले मात्रै विज्ञता हासिल गर्न सक्दैनथे । तँ चिता म पुर्याइदिन्छु भन्ने नेपाली उखानै छ । डा. राईको जीवनमा सो उखानले ठ्याम्मै मेल खायो । उनले आफ्नो जीवनमा आएको अवसरबारे प्रस्ट्याए, ‘अमेरिकाको डालसमा ह्यारी वर स्टिम नाम गरेका सर्जन रहेछन् । राजासँगै हावर्ड विश्वविद्यालयमा पढेका ह्यारी राजा वीरेन्द्रलाई भेट्न र सिकार खेल्न नेपाल आएका रहेछन् । सोही भेटमा उनले नेपालमा प्लास्टिक सर्जन नभएकाले म एकजनालाई ‘ट्रेन्ड’ गरिदिन्छु भनेर राजालाई भनेछन् ।’
तस्बिर सौजन्य : विजु महर्जन/रातोपाटी
२०७४ असार १५ ००:००